Bixiyeyaasha - Aloha United Way 2-1-1
Waxaan nahay Xiriiriye
Haddi ururkaagu yahay bixiye adeeg caafimaad iyo bini'aadmi ah oo la aqoonsan yahay ama urur yar oo bulshada ku salaysan oo bixiya gargaarka aasaasiga ah ee Hawai'i, AUW's 211 Helpline ayaa kaa caawin karta isku xidhka dadka u baahan ilahaaga. Waxaan sidoo kale caawin karnaa u gudbinta xubnaha bulshada ilo dheeraad ah.
Siyaasadda ku darida / ka saarida
Dhammaan adeeg bixiyayaasha hadda jira iyo kuwa suurtagalka ahba waa inay dib u eegaan annaga Siyaasadda Ku-Dridda/Ka-reebista. Siyaasaddu waxay qeexaysaa u-qalmitaanka barnaamijka iyo liisaska adeegga. Fadlan dib u eeg siyaasadda ka hor intaadan soo gudbin adeegyo ama liisaska cusub.
Siyaasadda dib u eegista
Haddii aadan waligaa hore u qorin kheyraad, fadlan halkan ka bilow.
Waxaad u baahan doontaa inaad ku darto hay'addaada ka hor intaadan ku darin ama cusboonaysiin barnaamijyada.
Ku dar Barnaamijyo Cusub
Ku dar barnaamij cusub oo ay hay'addaadu bixiso.
Waxaad u baahan doontaa profile hay'ad jirta. Haddi aanad lahayn profile jira, eeg tilmaamaha Wakaalada Cusub ee sare.
Cusbooneysii Hay'adda Jirta ama Barnaamijka Jirta
Cusbooneysii wakaalada jirta, goobaha, ama barnaamijyada
Haddii aad hore akoon u leedahay, halkan gal
Soo gal si aad wax uga beddesho
Wixii su'aalo ah ama macluumaad dheeraad ah, fadlan la xiriir:
Sai, 211 Kormeeraha Barnaamijka, at
808-543-2262 ama sai@auw.org.
Codso 211 Qalabka Taageerada
Haddii aad jeclaan lahayd boodhadh xayaysiis ah ama macluumaad si aad u bixiso ama u dhajiso dadweynaha, waan ku faraxsanahay inaan ku caawinno. Ku codso boodhadhka ama waraaqaha waraaqaha adoo email u diraya, sai@auw.org. Waxaad sidoo kale daabacan kartaa halkan.